Umzi mveliso weendaba weShishini-iTshayina Iindaba zeMizi mveliso kunye nabaxhasi
Encinane Single ngesirinji nokubandakanywa Pump
Amathe lokuzala Tester
YONWABELELA IINKONZO ZEEMITHI ZEHEMOGLOBIN KWIMPILO YAKHO
Ixesha Post: 11-08-2019
Ukulinganisa i-hemoglobin kubalulekile ekujongeni impilo yezigulana zakho kunye nokugcina umgangatho wobomi bazo. Ukwehla kwamanqanaba e-hemoglobin kunokuba sisalathiso seengxaki ezininzi ezinokubakho njengentsimbi kwizigulana. Kuba ukubekwa kweliso kwi-hemoglobin kubalulekile kuyo nayiphi na into ebonakalayo, SEJOY h ...Funda ngaphezulu »
Uxinzelelo lwegazi: Ubisi, ibroccoli, iyogathi kunye netofu kunokunciphisa ukufunda
Ixesha Post: 10-09-2019
Uxinzelelo lwegazi oluphezulu luchaphazela umntu omnye kwabadala abane e-UK, kodwa abantu abaninzi abazi ukuba banazo njengoko iimpawu azisoloko zibonakala okanye zibonakala. Eyona ndlela yokufumanisa ukuba unoxinzelelo lwegazi kukufunda rhoqo kuhlolwe, nokuba kungugqirha wakho okanye ngusokhemesti wasekhaya okanye usebenzisa ...Funda ngaphezulu »
Uxinzelelo lwegazi: Ijusi yeBeetroot inokuhlisa ukufunda
Ixesha Post: 09-29-2019
Uxinzelelo lwegazi oluphezulu luchaphazela umntu omnye kwabane abantu abadala e-UK, kodwa abantu abaninzi abanale meko abayazi ukuba banayo. Kungenxa yokuba iimpawu azifane zibonakale. Eyona ndlela yokufumanisa ukuba unoxinzelelo lwegazi kukuba ukufunda kwakho kuhlolwe rhoqo nguGqirha wakho okanye usokhemesti wasekhaya o ...Funda ngaphezulu »
Ixesha Post: 09-11-2019
A lot of friends ask doctor, why does the doctor of the hospital like to use electronic sphygmomanometer, but charge a patient to go home with electronic sphygmomanometer? In fact, this is our misunderstanding, there is no such rule, the current electronic sphygmomanometer and mercury sph...Funda ngaphezulu »
Esh International Protocol Uhlaziyo 2010
Ixesha Post: 10-31-2017
I-International Protocol for ukuqinisekiswa kwezixhobo abadala umlinganiselo uxinzelelo lwegazi wahlaziywa yi-European Society of lwegazi ngo 20101. Inani kuhlenga-hlengiswe protocol ehlaziyiweyo bayavuma ukuba ukuchana ifowuni iye yaphando inkqubela eyenzekileyo kwezobuchwepheshe, kwaye passin ...Funda ngaphezulu »
Ixesha Post: 10-05-2016
Ngo-2013, Ulawulo lwezoKutya noLawulo lweziyobisi (i-FDA) lwakhupha umthetho wokugqibela wokuseka inkqubo ekhethekileyo yokuchonga isixhobo eyilelwe ukufumanisa ngokufanelekileyo izixhobo ngokusasaza nokusetyenziswa. Umthetho wokugqibela ufuna ukuba iilebheli zeefowuni zibandakanye isixhobo sokuchonga esahlukileyo (i-UDI) kwiilebheli zezixhobo kunye ne-p ...Funda ngaphezulu »
Ukuchongwa kwesixhobo esahlukileyo-UDI
Ixesha Post: 12-28-2015
I-FDA iseka inkqubo ekhethekileyo yokuchonga isixhobo ekuchongeni ngokwaneleyo izixhobo zonyango ngokusasaza nokusetyenziswa kwazo. Xa iphunyezwe ngokupheleleyo, ilebheli yezixhobo ezininzi iya kubandakanya isixhobo esikhethekileyo sokuchonga (i-UDI) kwifom yomntu- efundeka ngomatshini. Abafaki zixhobo kufuneka bathobele ...Funda ngaphezulu »
Idilesi: Building 2, No.202, Zhenzhong Road, Lake Economy West &. Technology Zone, 310030 Hangzhou, China